एकमुखे रुद्राक्षको मूल्य करोडौं पर्छ ताकी एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाँउबाट धन “लाभ” हुन्छ । – पुरा पढ्नुहोस्……
एकमुखे रुद्राक्षको मूल्य करोडौं पर्छ ताकी एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाँउबाट धन “लाभ” हुन्छ ।
हजुरलाई थाहा छ ? एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ त्यसैले कमेन्टमा “ॐ “लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला! यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ । विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा ।
ए हजुरलाई थाहा छ ? एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ त्यसैले कमेन्टमा “ॐ “लेखेर विभिन्न ग्रुपमा शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला! हिन्दु धर्म अनुसार एक मुखे रुद्राक्षलाई भगवान शिवले सबै भन्दा रुचाएको फल मानिन्छ ।
एक दिन अचानक उनको मन दुःखी भयो । जब उनले आफ्नो आँखा खोले तब उनको आँखाबाट केहि आँशुका ढिक्का झरे । यही आशू पछि रूद्राक्ष नामको वृक्षका रूपमा उत्पन्न भयो । शिवमहापुराणमको विद्येश्वरसंहितामा रूद्राक्षको १४ वटा प्रकार बताइएको छ ।
सबैको महत्व र धारण गर्ने मन्त्र फरक-फरक हुने बताइन्छ । यीनलाई मालाको रूपमा लगाउनाले प्राप्त हुने फल पनि फरक-फरक हुने गर्छ । धर्म ग्रन्थमा रुद्राक्षलाई महाशिवरात्रीको दिनमा विधी-विधान पुर्याएर धारण गर्नाले विषेश लाभ मिल्ने गर्छ । थाहा पाऔ रूद्राक्षका प्रकार र धारणा गर्ने मन्त्र र प्राप्त हुने लाभ…
Prevमाघे संक्रान्तिको दिन, नुवाकोट तारुकामा यसरी हुँदैछ गोरु जुधाई, मर्ने गरी लड्छन् हेर्नुहोस यो रमाइलो भिडियो
Nextपहिलोचोटी भारतबिरुद्ध यसरि जंगिए रबि, भारतीय कम्पनीहरुको यस्ता घिनलाग्दा कर्तुतहरुको पर्दाफास (भिडियो )
“सिधा कुरा जनतासँग” आजको स्पेशल कार्यकम लाइभ हेर्नुहोस् (भिडियो )
काल आएपछी कसैको केही लाग्दैन भन्ने कुरा बिस्वास नगर्नेहरुले यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला.काल आएको छर्लंग क्यामरामा कैद(भिडियो सहित)
आज पैसा पठाउदै हुनुन्छ? साउदी , कतार, ,मलेसिया दुबई लगायत बिदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर यस्तो छ .